အေးဂျင့် အတုများ သတိပြု
Subject: အေးဂျင့် အတုများ သတိပြု Sat Oct 18, 2008 6:03 am
မြန်မာတွေကိုပဲ ရွေးလုပ်သည် ဆိုတော့ အတော် ခံပြင်း ဒေါသ ထွက်သွားသည်။ အဲဒီလို ကလိန်ကကျစ်နည်းဖြင့် မသိနားမလည်သော သူတွေဆီက ခေါင်းပုံဖြတ် စီးပွားရှာတာတော့ အတော် ရုပ်ဆိုးလွန်းသည်။
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ။ ကျွန်မအိမ်မှာ တည်းပြီး အလုပ်ရှာနေသည့် မိတ်ဆွေညီမလေး ဟိုတနေ့ က အင်တာဗျူးခေါ်သည့် အီးမေးလ် ရတော့ အတော်ပျော်သွားသည်။ ပထမဆုံး အင်တာဗျူးဆိုတော့ ပျော်ပေမပေါ့။ ခဏကြာတော့ သူနဲ့ အတူ အလုပ်ရှာနေသည့် သူ့ မောင်လေးပါ ဆင်တူ အင်တာဗျူးခေါ်သည့် အီးမေးလ် ရတော့ နဲနဲတော့ သံသယ ၀င်သွားသည်။ သိပ်မပျော်နေနဲ့ဒါအေးဂျင့် ဖြစ်ဖို့ များတယ်လို့သတိပေးရသည်။ နောက် နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ သူတို့ နှင့် မရှေးမနှောင်းလာသည့် သူငယ်ချင်းပါ တနေရာထဲမှ ဆင်တူ အီးမေးလ် ရသည်ဟု ဖုန်းဆက်လာပြန်သည်။ သံသယက ပိုပို ကြီးလာပေမယ့် သူတို့စိတ်ဓါတ်မကျအောင် သွားကြည့်လိုက်ပေါ့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရသည်။
နေ့ လည်ကျတော့ ဖုန်းဆက်လာသည်။ တကယ့် အင်တာဗျူး မဟုတ်။ ၀န်ထမ်းဆိုလို့မိန်းမ နှစ်ယောက်သာ ရှိသည့် အခန်းကျဉ်းလေး။ ရောက်ရောက်ချင်း form ဖြည့်ခိုင်းပြီး သူတို့ ဆီမှာ အလုပ်နှစ်ခု ရှိကြောင်း ပြောပြီး ပိုက်ဆံ ၁၂ ဒေါ်လာ တောင်းသည်။ သူကလဲ ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံ အလုပ်ကလဲ လိုချင်တော့ ပိုက်ဆံပေးခဲ့သည်တဲ့။ မှားသွားလားလို့ မေးတော့ ကျွန်မ ဘာပြောရမှန်းမသိ။ အလုပ်လိုချင်သူတွေ အတွက် ၀န်ဆောင်ခ ယူ၍ လုပ်ပေးသော တရားဝင် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (အေးဂျင့်) တွေ ရှိသော်လည်း ခုလို မရိုးသား အင်တာဗျူး အယောင်ဆောင်ပြီး ပိုက်ဆံတောင်းတာတော့ ခုမှ ကြားဖူးသည်။
လိမ်တာ ဖြစ်ဖို့ များတယ်လို့ပြောလို့ မှ မဆုံးသေး၊ ခုတင် အင်တာဗျူးက ပြန်လာရုံ ရှိသေး အရင်နေ့ က အီးမေးလ် အတိုင်း စာသား တထပ်ထဲနှင့် နောက်တကြိမ် ရောက်လာပြန်သည်။ ပထမတော့ ဒုတိယအကြိမ် အင်တာဗျူးခေါ်သည် အထင်နှင့် ပျော်နေကြသည်။ သူ့ မောင်လေး အီးမေးလ်ကို စစ်လိုက်တော့ သူ့ အတိုင်း အီးမေးလ် တခု ထပ်ရပြန်သည်။ လောဘတက်ပြီး ပို့ ပြီးသားလူလား၊ လာပြီးသားလူလား မသိပဲနှင့် အသဲအသန် ပို့ နေခြင်းပင်။
နောက်တနေ့သူ့ မောင်လေးက လိမ်တာ သေချာအောင် သွားလေ့လာသည်။ သူ့ အမတုန်းက လိုပဲ သူတို့ မှာ အလုပ် နှစ်နေရာ ရှိသည်ဟု လိမ်ပြန်သည်။ မောင်နှမမှန်း မသိ။ ဒီတခါတော့ ကောင်လေးက ဟန်မပျက် form ဖြည့်ပြီး ပိုက်ဆံ ၁၂ ဒေါ်လာ တောင်းသော အခါ မပါလာကြောင်းပြောပြီး မပေးခဲ့။ ဒီတော့ ပိုက်ဆံ မပေးရင် သူတို့အလုပ်ရှာ မပေးနို်င်လို့ခပ်တင်းတင်း ပြန်ပြောသည်တဲ့။ ကောင်လေးနဲ့အ၀င်အထွက် လာသမျှ မြန်မာတွေ ချည်းပဲ ဆိုပဲ။
မနေ့ ညက ဒီအကြောင်းကို အလုပ်ရှာနေသည့် အသိအမကြီး တယောက်အား ပြောပြ သတိပေးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်က သူ့ သူငယ်ချင်းတယောက်လဲ အဲဒီလို ခံခဲ့ရသည်တဲ့။ company နာမည်က အတူတူ။ သတင်းစာထဲမှာ ဟုတ်တိပတ်တိ တလက်မ ပတ်လည်လောက်နှင့် ကြေငြာတာလဲ အတူတူ။ သူ့ တုန်းက ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးခဲ့ရသည်တဲ့။ မြန်မာတွေကိုသာ ရွေးလိမ်သည်။ အလုပ်လဲ တကယ်ရှာမပေးပါတဲ့။
ခုတလော မြန်မာပြည်က အလုပ်လာရှာ သူတွေ လှိမ့်ဝင်လာတော့ သူတို့ လို လိမ်စားနေသူတွေ အတွက်တော့ အကွက်။ တယောက်ကို ၁၂ ဒေါ်လာ။ တနေ့အယောက် ၂၀ ဆို ဒေါ်လာ ၂၄၀။ တလဆို ဒေါ်လာ ၄၈၀၀။ အင်း… အတော်ကို အကြံပက်စက်ပါပေ့။
နေရာက China Town ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လှည့်ပတ် ကျက်စားနေသည်။ မဟုတ်တာ လုပ်သူဆိုတော့ တနေရာထဲမှာ အခြေမကျရဲ။
သူတို့အင်တာဗျူးရှိတယ် ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆီကို ပို့လိုက်တဲ့ Email မူရင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
Direction:- Take MRT down to Chinatown station and exit from D. U can go to OG taxi stand there and walk towards the direction of some HDB at Chin Swee Road . Go straight until u can see Seng Siong ….We are just behind Seng Siong. U can ask people around there ..
ဒီသတင်းက ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျတော်ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ပါ။ ဒီကြား ၂ လလောက်မှာ အိုင်တီပတ်သတ်ပြီးအလုပ်တွေခေါ်တာနည်းပါတယ်။ သတင်းစာတွေ့လို့ ပို့လိုက်တာ အေဂျင်မှန်းတော့ မသိဘူး။ email က singnet ကို သုံးထားတာဆိုတော့ မကြီးမှန်းတော့ ရိတ်မီတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျတော်သွားခဲ့တယ်။ ကျတော်ကို တောင်းတာ ၂၀၀ ပါ။ ကျတော် Qualification နှင့် ချက်ချင်းပဲရတော့မလိုနဲ့ စကားတော့ကျအောင်ပြောပါတယ်။ registration from ကို ဖြည့်ခိုင်းပြီ ပိုက်ဆံတောင်းပါတယ်။ ကျတော်လဲမပါဘူးပေါ့ မပေးနိင်ဘူးလေ။ ကျတော်ဒီမှာနေတာ ကြာနေမှန်းသိတော့ ဘဏ်ကဒ်မသုံးဘူးလားတဲ့ ရှိတယ် ဒီနေ့မှာ ကျန်နေခဲ့တာလို့ အတင်းပဲပြန်ပြေးခဲ့ရတယ်။
စလုံးမှာ အလုပ်ရှာ ဘို့ Web site တ္မေပါ
AsiaOne Careers: http://careers.asia1.com.sg or The Straits Times: www.st701.com
Job Hunter: www.j-hunter.com/js.asp?regional=SIN
Job Seek: www.jobseek.com.sg
Michael Page International: www.michaelpage.com.sg
MediaCorp Mocca: www.mocca.com
st701 က Straits Times သတင်းစာထဲက အလုပ်ကြော်ငြာတွေကို web ပေါတင်ထားတာပါ Straits Times ဝယ်ရင် Wedneday နဲ့ Saturday ဟာပဲ အလုပ်ကြော်ငြာ များပါတယ် Saturday ဟာဆို Executive Appointments လို Company ကြီးကြီး Position မြင့်မြင့် တွေပါ ပါတယ်
Jobsdb ဆိုရင် agent ကကြော်ငြာ တွေများလွန်းတယ်
Jobstreet ကမဆိုးဘူး Company တိုက်ရှိက်ကြော်ငြာ တာများဒယ်....